Japan kuzivisa COVID-19 Nyika yeEmergency mune mamwe masere matunhu
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Japan Kuputsa Nhau » Japan kuzivisa COVID-19 Nyika yeEmergency mune mamwe masere matunhu
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Japan Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Sports • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Japan kuzivisa COVID-19 Nyika yeEmergency mune mamwe matunhu masere
Hokkaido, Miyagi, Gifu, Aichi, Mie, Shiga, Okayama neHiroshima matunhu achave zviri pamutemo pasi peHurumende yeEmergency kubva neChishanu ichi kusvika Gunyana 12.
Japan inowedzera coronavirus State yeEmergency.
Kuwedzera kweHurumende yeEmergency kunouya seTokyo inogamuchira maParalympics.
Zvipatara muJapan zviri kunetsekana pakati pe COVID-19 surge.
Sekureva kwenzvimbo dzehurumende yeJapan, Japan ichawedzera mamwe masere kumatunhu eCOVID-19 State of Emergency ayo parizvino anofukidza Tokyo nedzimwe nzvimbo gumi nembiri, mukuyedza kumisa tsunami yenyika yehutachiona hwecoronavirus.
Gurukota reJapan Yoshihide Suga akasangana nenhengo dzeKhabhinethi yake kusanganisira gurukota rezvehutano Norihisa Tamura naYasutoshi Nishimura, gurukota rinotungamira mhinduro yeCOVID-19, kuti vataure nezvedanho iri, nechisarudzo chekuitwa pamutemo pamusangano wevashandi neChitatu. .
Pasi peHurumende yeEmergency, maresitorendi anobvunzwa kuti asashandise doro kana kupa karaoke, uye varairwa kuti vavhare na8 manheru. Zvivakwa zvikuru zvekutengesa zvinosanganisira zvitoro zvemadhipatimendi nenzvimbo dzekutengesa zvinokumbirwa kudzikamisa huwandu hwevatengi vanobvumidzwa kupinda panguva imwe chete.
Suga yakurudzirawo veruzhinji kuti vadzikise kuenda kunzvimbo dzakazara nevanhu ne50%, uye kumafemu kuve nevashandi vanoshanda kubva kumba uye kucheka nhamba dzevafambi ne70%.
Kuwedzerwa kwenzvimbo ye emergency - parizvino iri mu Tokyo pamwe neIbaraki, Tochigi, Gunma, Chiba, Saitama, Kanagawa, Shizuoka, Kyoto, Osaka, Hyogo, Fukuoka neOkinawa matunhu - anouya apo guta guru rinogadzirira maParalympics, achaitwa anenge asina vatariri, kubva Chipiri.
Hurumende yakagadzirirawo kuwedzera iyo quasi-mamiriro ekukurumidzira anofukidza matunhu gumi nematanhatu kuenda kune mamwe mana - Kochi, Saga, Nagasaki neMiyazaki - sosi yakati, danho rinobvumidza magavhuna kuisa zvirambidzo zvebhizimusi munzvimbo dzakasarudzika kwete pane yavo yese matunhu.
Zvipatara munzvimbo zhinji dzeJapan zviri kunetsekana pakati pekuwedzera kwezviitiko zveCOVID-19, nekushomeka kwemibhedha kumanikidza vazhinji vane zviratidzo zvakanyanya kuti vagonane pamba.
Vhiki yapera, the Sangano reMagavhuna Enyika yakadana hurumende kuti imanikidze mamiriro ekukurumidzira kana mamiriro ekukurumidzira nyika yose kuitira kudzivirira kupararira kwezvirwere.